यस्तो छ ब्राेकर अकाउन्ट परिवर्तन गर्ने तरिका । How to change broker account in Nepal - DURBAR TIMES
Homemarkettipsयस्तो छ ब्राेकर अकाउन्ट परिवर्तन गर्ने तरिका । How to change broker...
यस्तो छ ब्राेकर अकाउन्ट परिवर्तन गर्ने तरिका । How to change broker account in Nepal
पछिल्लाे समय नेपालि शेयर बजारमा लगानीकर्ताहरू ब्राेकरकाे रबैयाबाट पिडित भैरहेकाे गुनासाहरू सुन्न पाइन्छ । ब्राेकरले काराेबार गरेकाे रकम समयमै उपलब्ध नगराइदिने र कस्टुमर केयरसमेत नगर्ने गरेकाे कतिपय ग्राहकहरूकाे गुनासाे रहेकाे छ । यसै सन्दर्भमा हामीले नेपालमा आफूले काराेबार गरिरहेकाे ब्राेकर आफूलाइ चित्त नबुझेकाे खण्डमा परिवर्तन गर्न मिल्छ कि मिल्दैन भनेर हामीले केही जानकारी लिने उद्देश्यले केही लेख तथा समाचारहरूलाइ आधार बनाएर याे लेख तयार पारेकाे छाैँ ।
यस्ता धेरै मानिसहरु छन्, जो विभिन्न समस्याका कारण ब्रोकर परिवर्तन गर्न चाहिरहेका छन् । यद्यपी यिमध्ये कतिपय आफुले कारोबार गरिरहेको ब्रोकर कसरी परिवर्तन गर्ने भन्ने विषयमा अनभिज्ञ छन् ।
याे विषयमा स्टक ब्रोकर एसोशियसनका अध्यक्ष भरत रानाभाट भन्छन्, ‘अवश्य पनि, लगानीकर्ताहरुले ब्रोकर परिवर्तन गर्न सक्छन्।’ तर कसरी त?
सबैभन्दा पहिले आफूले कारोबार गरेको ब्रोकरकोमा हिसाब किताब फछ्र्यौट गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसपछि आफ्नो अकाउन्ट डिएक्टिभेट गर्नका लागि अनुरोध गरेपछि ब्रोकरले उक्त अकाउन्ट डिएक्टिभेट गरेसँगै अर्काे ब्रोकरकोमा नयाँ अकाउन्ट खोली एक्टिभेट गर्न मिल्छ।
एकातिर डिएक्टिभेट हुने बित्तिकै अर्काेतिर एक्टिभ गर्न मिल्छ । तर मुख्य समस्या भनेको जहाँ काम भइरहेको छ, त्यहाँको डिएक्टिभेट नगर्ने अनि अर्को ब्रोकरकोमा गएर एक्टिभ गर्नु भनेर अनुरोध गर्दा चाहिँ पहिलेको ब्रोकरमा नै लेनदेन हुनसक्छ । त्योभन्दा पहिले आफूले जहाँ काम गरेको छ, त्यसलाई क्लियर गरेर आफ्नो अकाउन्ट डिएक्टिभेट गर्ने भनेर ब्रोकरसँग सम्झौता गरेपछि डिएक्टिभ गर्न सकियो । त्यसपछि नेप्सेलाई ब्रोकर परिवर्तन गर्ने सम्बन्धमा पत्र लेखेर ब्रोकर परिवर्तन गर्न सकिन्छ।’
तर पछिल्लो समय दुई/तीनवटामा ब्रोकर कार्यालयमा अकाउन्ट खोल्ने अनि पुरानो खाता डिएक्टिभ नगर्ने र अर्काे नयाँ अकाउन्ट खोलेको ब्रोकर कार्यालयमा गई ‘मेरो अकाउन्ट एक्टिभ भएन’ भनेर गुनासो गर्ने गरेको पाइन्छ ।
याे सन्दर्भमा नेप्सेका प्रवक्ता मुराहरि पराजुली भन्छन्, ‘कारोबार गरिरहेको ब्रोकर परिवर्तनका लागि क्लाइन्टले पुरानो ब्रोकरको सहमति लिएर नेप्सेमा रिक्वेस्ट पठाउनुपर्छ ।’ मैले यो (ब्रोकरको नाम) ब्रोकरबाट कारोबार गरिरहेको थिएँ, अब नयाँ ब्रोकरबाट कारोबार गर्दैछुँ भनेर डिम्याट नम्बर, कारोबार गर्न चाहेको ब्रोकर नम्बर र लगानीकर्ताको क्लाइन्ट आइडी सहित ई–मेल या पत्र पठाएपछि नयाँ ब्रोकरकोमा कारोबारका लागि स्वीकृती प्राप्त हुन्छ । यसका लागि सबैभन्दा पहिले पुरानो ब्रोकारकोबाट सहमति लिनुपर्ने उनको भनाई छ ।
‘ब्रोकरको सहमति नभई प्रक्रिया अगाडि बढ्दैन । किनकि पुरानो ब्रोकरसँग क्लाइन्टको लेनदेन बाँकी पनि हुनसक्छ । त्यसैले सर्वप्रथम ब्रोकरकोबाट सहमति लिन जरुरी हुन्छ।’
यसरी ब्राेकर अफिसमा सम्पर्क गरेर आफ्नाे सबै हिसाबकिताब फर्छ्याैट गरेपछि नयाँ ब्राेकरकाेमा अकाउन्ट खाेल्न सकिन्छ ।
मेराेलगानी डट कम
Previous articleपरिवारकाे मेराे शेयर अकाउन्ट कसरी लिन्क गर्ने? के के गर्न सकिन्छ लिन्क अकाउन्टबाट ?